Aakhe – your second third eye
your second third eye
जनताको जलविद्युतको पहिलो शेयर म किन्छु : प्रधानमन्त्री
यो वर्षको सातौं पश्चिमी वायु: आज पानी पर्ने, भोलि पनि बादल
रामबहादुर बमजनमाथिको अनुसन्धान : प्रहरीलाई विवादमा पर्ने डर !
गोंगबुमा १ लाख ५१ हजार रूपैयाँ नक्कली नोट भेटियो
घरभित्र खाल्डो खनेर बोरामा लुकाइएको थियो १८ किलो सुन, हेर्नुस् तस्वीर
घिउ ढुक्कले खानुहोस्, यस्तो छ फाइदा
पूर्वमन्त्री शर्माको निधन
भ्रष्टाचार विरुद्धको कथामा ‘सय कडा दश’
डेढ वर्षको छोरा बचाएर हिटरमा जले इन्जिनियर दम्पत्ति
प्राकृतिक रुपमै निरोगी हुने कि औषधी र अस्पताल खोज्ने ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताको जलविद्युत् आयोजनाका कार्यक्रमको पहिलो शेयर आफूले खरिद गर्ने उद्घोष गरेका छन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आजदेखि सुरू गरेको ‘नेपालको पानी जनताको लगानी, हरेक नेपाली विद्युतको शेयरधनी’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सो कार्यक्रमको पहिलो शेयरधनी आफू बन्ने घोषणा गरेका हुन्। कार्यक्रम सुरू भएको ३५ दिनभित्र सबै नेपालीले शेयर खरिद गर्न
पुस २३ गतेपछि लगालग आइरहेको पश्चिमी वायुको प्रभावले देशभर लगातार एकसातासम्म घाम लाग्न सकेको छैन। त्यसयता पहाडी भू-भागमा सातामा दुई दिन हल्कादेखि मध्यम वर्षा भएको छ भने उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ। यो क्रम अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ। ‘यसवर्षको सातौं पश्चिमी वायुले बिहीबारदेखि नै मौसम बदलिएको छ। पश्चिमी क्षेत्रमा हिजै पानी परिसक्यो।
१ फागुन, काठमाडौं । तपश्वीको भेषमा अनुयायीको हत्या र बेपत्ता बनाएको आरोप लागेपछि पुस महिनाभर रामबहादुर बमजन चर्चाको केन्द्रमा रहे । नेपाल प्रहरीको मकवानपुर, बारा र नुवाकोटस्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा ४ परिवारले आफन्त बेपत्ता भएको जाहेरी दिएपछि घटना थप पेचिलो बन्यो । उजुरीपछि सिन्धुपाल्चोकस्थित बमजन आश्रममा प्रहरीले २० पुसमा छापा मार्‍यो । त्यसक्रममा ‘शंकास्पद गतिविधि’
काठमाडौं । काठमाडौंको गोंगबुबाट ठूलो परिमाणमा नक्कली नोटसहित एक जना पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्नेमा ओमबहादुर कुँवर क्षेत्री छन् । महानगरीय प्रहरी प्रभाग, गोंगबुले उनलाई १ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको नक्कली नोटसहित पक्राउ गरेको हो । प्रभागका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक मोहन विक्रम केसीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘१ सय ५२ थान हजार दरको नोट बरामद
कञ्चनपुरको पुनर्बास नगरपालिका–२, दशरथबस्तीमा ठूलो परिमाणमा सुन लुकाइएको सूचना पाएपछि बिहीबार दिउँसो अनुसन्धान अधिकारीहरुको एउटा टोली त्यसतर्फ हुइँकियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कञ्चनपुरको क्षेत्र भए पनि त्यहाँ केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)का एसपी सुदिप गिरी र महागनरीय अपराध महाशाखाका डीएसपी रुगम कुँवर पनि खटिएका थिए । निर्मला हत्या प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको यो प्रहरी टोलीले सुनबारे सुराक
अहिले धेरैले आफ्नो छाकबाट घिउ कटौती गर्न थालेका छन् । घिउसँग हाम्रो भान्साले दुरी बढाउँदैछ । हामी घिउसँग डराउन थालेका छौं । किन ? किनभने, हामीलाई चिकित्सकले भन्ने गरेका छन्, ‘चिल्लोचाप्लो नखानु ।’ जब हामी मधुमेह, उच्च रक्तचाप जस्ता रोगहरुको भय पाल्छौं, चिल्लो चाप्लो खानेकुरा घटाउन थाल्छौं । त्यसैगरी जब हामी मोटोपन घटाउने चक्करमा लाग्छौं,
१६ पुस, काठमाडाैं । पूर्ववन तथा भूसंरक्षण राज्य मन्त्री कमलादेवी शर्माको निधन भएको छ । ५६ वर्षीया शर्माको ह्रदयघातका कारण सोमबार ललितपुरस्थित मेडसिटी अस्पतालमा निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जानकारी दिएको छ । शर्मा २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन राप्रपा नेपालबाट समानुपातिक प्रणालीतर्फबाट सभासद बनेकी थिइन् । उनी राप्रपा प्रजातान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य भएकी थिइन् । उनका
रामशरण पाठकको लेखन तथा निर्देशनमा तयार भएको चलचित्र ‘सय कडा दश’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । यो चलचित्र माघको १८ गतेबाट रिलिज हुँदैछ । यो चलचित्रले भ्रष्टचार र प्रेमको कुरालाई जोडेको छ । ट्रेलर सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै यसका निर्देशक पाठकले यूवाहरुले यो चलचित्र हेर्नैपर्ने बताए । सबै नेपालीले भ्रष्टाचार विरुद्ध आ–आफ्नो तबरबाट कदम मात्र उठाएको
१६ पुस, काठमाडौं । जाडोमा हिटर ताप्न जति आनन्द आउँछ, यससँग उत्तिकै सावधानी पनि आवश्यक छ । यही हिटरले काठमाडौंमा एक इन्जिनियर दम्पत्तिको ज्यान लियो । जाइकामा कन्सल्टेन्ट रहेका इन्जिनियर पुष्कर जोशी र सडक विभागमा काम गर्ने इन्जियनर अप्सरा श्रेष्ठले पाँच दिनको अन्तरालमा ज्यान गुमाएका हुन् । उनीहरु गत ७ गते शनिबार हिटरबाट सल्केको आगोको लप्कामा
नेपाली समाजमा एउटा रमाइलो प्रसंग छ । जब कोही फलफूल बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन् । छिमेकीले सोध्छन्, ‘होइन, कोहि बिरामी छ ?’ छिमेकीले किनपनि यस्तो आशंका गरे भने तपाईंले फलफूल बोक्नुभएको छ । अर्थात हामी घरमा कोही बिरामी परे फलफूल ख्वाउँछौ । कोही आफन्त, साथीभाई, छिमेकी अस्पतालमा भर्ना भए भने उनलाई भेट्न जाँदा फलफूल, जुस वा
© 2018 Aakhe - WordPress Theme : by Sparkle Themes